SomaliTalk.com » Kooxda Elman oo ku Guuleysatay Tarankii dib u soo Nooleynta Nabada
Naadiga kubada cagta ee Elman ayaa ku guuleystay tartankii dib usoo nooleynta nabada Soomaaliya oo todobaadyadii la soo dhaafay ka soconayay Garoonka Dugsiga Tababarka Booliska ee Magaalada Muqdisho.
Cayaarta oo ahAyad mid aad u adag ayaa waxaa u soo daawasho tagay dadweyne aad u fara badan oo kala taageerayay labada kooxood, waxaana la arkayay taAgeerayaal Mikrofono wata oo gaaf wareegaya daafaha garoonka.
Cayarta ayaa 90-kii daqiiqadood ee loogu tala galay ku soo idlaatay bar bar dhac 1-1 ah, waxaana kadib la dhigay rigooreyaal iyadoo guushuna ay ku raacday Naadiga Elman.
Naadiyada Elman iyo Heegan oo maalinkaa soo bandhigey Ciyaar ay jecleysteen Dadweynihii u soo daawasho tagey ayadoo labadaan Kooxood ay yihiin laba kooxood aad u farasmo badan isla markaana leh Taageerayaal Fara badan .
Guddoomiyaha Xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta Mudane Siciid Maxamuud Nuur ayaa ka hor intii aanay cayaartu bilaaban waxaa uu la hadlay cayaartoyda labada kooxood waxaana uu u sheegay in ay asluub wanaag muujiyaan inta cayaartu socoto.
“Waxa aad cayaareysaan waa kubad cag, waxaana idinku boorinayaa in aad soo bandhightaan cayaar wanaag”ayuu yiri Guddoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta Siciid Maxamuud Nuur u sheegay cayaartoyda labada kooxood. Laga doonaya in ay soo bandhigaan Ciyaar ay jecleystaan Dadweynaha Daawanaya
Tartankan oo soo bilowday 6-dii October ayaa waxaa ka qeyb galay 17 kooxood, waxaana u jeedadiisu ahayd in lagu dhiiri geliyo nabada iyo is dhexgalka bulshada iyo weliba u Diyaargarowga Furitaanka Horyaalka Soomaliya
Agaasimaha guud ee wasaarada Dhalinyarada iyo Isboortiga Saacid Maxamed Abuukar ayaa markii cayaartu dhamaatay kadib waxaa uu isla goobta koobkii ku guddoonsiiyay kabtanka Naadiga Elman Yaasuiin Cali Cigaal, waxaana uu ugu hambalyeeyay guusha ay ka gaareen tartankii dib usoo nooleynta nabada dalka.
Dhanka kale Xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta ayaa soo saaray jadwalka horyaalka 6-aad ee kooxaha heerka 3-aad oo si rasmi ah magaalada Muqdisho uga furmi doona todobaadka dambe.-
Sida jadwalka ku cad waxaa cayaarta ugu horeysa ay dhex mari doontaa naadiyada kala ah Geeska Afrika iyo Gacso